Ungaita Sei Kuti Uve Munhu Ari Nani: 4 Chokwadi chisingadzivisike Chauchasangana Nacho - Blog
4 Chokwadi Chisingadzivisike Chauchasangana Nacho Kuti Uve Munhu Ari Nani
Iwe unoda kuve munhu ari nani, handiti? Iwe unofanirwa kuita kana iwe ungadai usiri kuverenga ichi chinyorwa. Zviri zvechisikigo chete kuda kunatsiridza pauri uye kukura uri wega zvinenge Darwinian, chete iwe uri kutarisira kurongedza mamirioni emakore ekushanduka kuita muhupenyu humwe chete.
Mikana iripo, zvakadaro, iwe wakangoita chete matanho emwana kusvika ikozvino uye iwe wave kusvika padanho rekushushikana kwakazara uko pasina chaunoedza chinoita kunge chinoshanda.
Iwe unoona, dambudziko nderekuti mazhinji emazano akapihwa - nevarairidzi, vadzidzisi, gurus, uye, hongu, mawebhusaiti seizvi - rudzi rwezvinhu zvakajairika, zvepamusoro zvinhu zvisingatarise nyaya dzepamoyo dzatinotarisana nadzo tese. Tinoudzwa iva netsika , dzidzira kukanganwira, tenda zvese zvatiinazvo, kuremekedza vamwe , uye rega kutaura kwakashata-kutaura, blah, blah, blah.
Uye zvirokwazvo, zvese izvi zvinhu zviito zvinoyemurika zvauchazobatsirwa nazvo kusvika pane imwe nhanho, asi hapana kashoma kutaurwa nezve tambo dzepasi dzinozvisunga pamwechete. Hapana munhu anotaura nezvezvakakosha zvinhu zvinobva kwese-kuzvivandudza kunobva.
Ichi chinyorwa chichaedza izvozvi - kuburitsa chokwadi chisingarambike chekuve munhu ari nani uye kurarama hupenyu huri nani. Inogona kukundikana zvinosiririsa uye iwe unogona kufunga kuti zvese mutoro wemarara, asi ndinovimba kwete.
Ipapo ipapo, ngatitorei kuratidzwa uku mumugwagwa…
1. Iyo Synergy YeKupa Uye Kubatana
Makaro anoita kunge akaomeswa mupfungwa dzevanhu, nhaka yenhaka yemadzitateguru edu uko kwakasara vapenyu chete. Isu tinowanzo tora chero zvatinogona uye tinounganidza zviwanikwa kure senge tsindi diki dzinovanza nzungu dzakagadzirira chando.
Asi isu hatifanirwe kusangana nenguva dzekutambudzika sezvinoita mhuka dzesango. Chokwadi, tinogona kurasikirwa nemabasa edu kana kunetseka neimwe nzira kuti tiwane raramo, asi, kune chikamu chikuru, hatitarisane nechokwadi che nzara pagore (tiri kutaura nyika yakabudirira pano).
Inokumbira iwo mubvunzo, saka, kuti sei isu isu, senhengo dzesimba rakakura pasi rino, takaputirwa neupfumi hwedu pamwe nekugara zvakanaka.
Mhinduro, zvinoshamisa, ndeyekuti pamwe isu hatina kuzvisarudzira pachedu sekutanga kwazvinoita - tinongofunga isu tiri.
nguva yakareba sei varume kukwevera kure
Ingo tarisa zvakakukomberedza uye zvibvunze kuti zvinhu zvako zvese zvepfuma zvakabva kupi. Wakagadzira tafura yekofi nemaoko ako akanaka here? Wakasonera hembe dzawakapfeka? Wakakura here zviyo zvapinda muchingwa chawachivira mangwanani ano?
Kwete, hongu hauna. Mumwe munhu akadaro.
Zvakawanda sezvaungangoda kuunganidza hupfumi hwemari uye hwepfuma kuti ubatsirwe, haugone kupukunyuka chokwadi chekuti chinenge chinhu chose muhupenyu hwako chinovimba nevamwe vanhu. Mari ingori nzira yekuita kuti kuchinjanisa kwenhumbi nemasevhisi anyatsoshanda.
Iyi, saka, ndiyo chiratidzo kune imwe yemitemo yakakosha yekuva munhu ari nani: iwe unobatsirwa kubva kune vamwe uye ivo, zvakare, vanobatsirwa newe.
Sosaiti yakachena synergy apo 2 + 2 = 5, asi runyorwa rwema2s rwusingapere uye mhedzisiro yacho chinhu chakanakira munhu wese.
Asi mira, ndinoziva zvauri kufunga… .iwe urikufunga 'asi ini ndinogona kupa zvinopfuura zviviri, saka zvirokwazvo ndicharasikirwa?'
Zvakashata! Kana, pachinzvimbo che2 + 2, isu tine mamiriro ezvinhu ari 3 + 1 = 5, munhu ane 3 anogona kubvunza kana zviri izvo zvakanakira kugovana. Mushure mezvose, ivo vanofanirwa kutsemura mashanu uye vozopedzisira vaine mashoma pane matatu avakaisa.
Zvakaipa zvakare! Uhwu pfungwa dzakakanganisika nekuti pane kuti vapatsanure zvikamu zvishanu nepakati, mapato ese anobatsira anowana mukana kubva kune ese mashanu.
Zviise nenzira iyi, kana iwe uchida kuvaka imba, iwe uchazoda mugadziri, injinjini yezvivakwa, chidhina, wedenga remba, muvezi, wemagetsi, pombi, uye vamwe vanhu vazhinji kunze.
Iye zvino, mugadziri uye injinjini yezvivakwa angatenda kuti zvavakaisa zvinokoshesa zvakapetwa zvakapetwa zvemubridhinhi wepasi, uye mihoro munyika yanhasi ingaite senge inobvumirana. Asi, kana bato rega rega raida kugara muimba yakapera, vaifanirwa kushanda pamwechete kuti vadaro.
Iyo dhizaini, sekufunga kwaanogona kuzvifunga iye seakakosha cog mumushini, anozopedzisira asisina denga pamusoro pemusoro wake kana akafunga kubvisa mabasa ake nekuda kwekuti, mumaziso ake, vamwe havaunze zvakawanda tafura.
Chokwadi, anogona kunge achigona kuisa tende, asi ndiani anoda kugara mutende? Kwete, anongogona kunakidzwa nekugarika kweimba yemazuva ano kana achinge achishanda nevamwe vese vatengesi kuti vavake.
Kana kutora shizha kubva munyika yezvipembenene uye wotarisa chinangwa chakajairika chesvosve, mhanje, uye nyuchi yeuchi. Kune zvirokwazvo avo vane akakosha mabasa kupfuura vamwe - mambokadzi nevashandi vake vepedyo, semuenzaniso - asi pasina nhengo yega yega yekoloni inoshanda pamwechete, pangave pasina koloni yekutaura nezvayo.
Saka iko kupi iko kunetswa kwakashata kwemaanalogies uye kutaura kwekutungamira, ungangodaro uchishamisika. Zvakanaka, ndezve izvi: kuti uve munhu ari nani, kuchenjera kutarisa zvakanyanya pane zvaunogona kupa kune vamwe pane pane zvaunowana mukudzoka.
Kubatsira vamwe vanhu , mune chero chinzvimbo, inzira-yemoto nzira yekuona kuti mupiro wako ku synergy equation yakakura kwazvo sezvinobvira. Rangarira, hazvina basa kuti unopa zvakadii, iwe uchagamuchira kubatsirwa kukuru kumashure sezvo rese richikura muhukuru.
Ehe, pane divi remafungiro kukakavara uku uye, chokwadika, haugone kupa zvese zvaunazvo kune vamwe, asi paunenge uine zviwanikwa zviri kushomeka, une mukana wekuzvipa kune zvakanakira munhu wese. .
Izvo hazvidi kuve chipo chemari pachokwadi, mari haiwanzo kubatanidzwa. Ndezve kupa nguva yako, hunyanzvi hwako, kutarisisa kwako, uye rudo rwako uye hanya kune vamwe.
Izvo hazvidi pamusoro pekuzvipira kana kuzviita iwe pekutanga kana zvichidikanwa kwete kuzvida chero nepadiki. 'Me' nguva 'yakakosha kana iwe uchizoda kuve anokwanisa uye anokwanisa kutora chikamu munyika yakafara.
2. Hazvina Kukwana Kuda Chinhu
Iko hakuna kana pfungwa imwechete kunze uko isina kuzadzwa, zvirinani muchidimbu, nezvido uye zvishuwo. Idzi hope dzimwe nguva dzinogona kunge dzakatsauswa kana kufunga zvisina kunaka, asi zviripo zvakadaro.
Dambudziko neizvi riri pachena: haugone kungoda chimwe chinhu uye kutarisira kuti chiwire mumakumbo ako. Iko hakuna genie muhombodo yakamirira kuti ikupe iwe zvishuwo zvitatu.
Kana iwe uchida chimwe chinhu, unofanirwa kubva kuseri kwako wochishandira. Asi vangani vedu vanoita? Pazvishuwo nezvishuwo zvese zviri mupfungwa dzevanhu izvozvi, mangani iwe aunofunga kuti achaitwa?
Uye chiito iwe unofanirwa kana iwe uchizoshandura hope kuva chokwadi.
Dambudziko iri rinogona kuenzaniswa nehurongwa hwazvino hwekuchengetedza hutano hwatinofarira. Une chirwere uye unoenda kuna chiremba wako uine tarisiro yekuti vachakupa piritsi kuti urape.
Kana vakadaro, pane mukana wakanaka wekuti iwe utore piritsi uye uve nani. Kana iwe ukaenda kuna chiremba uye ivo, pachinzvimbo, vanoraira kurovedza muviri, kutambanudza, shanduko kune chako chikafu kana mararamiro, pane mukana wekuti iwe uedze kwenguva pfupi usati warega.
Hechino chinhu: hapana mashiripiti piritsi yekukura kwega kana paine, isu tese tingave takabudirira pazviri.
Kuti uve munhu ari nani, iwe unofanirwa kunge uchida kuisa mune yakaoma kubatanidzwa. Iwe ungatofanira kutora miitiro iri mupfungwa kana mumuviri inoda, kurega zvinhu zvauri kunakidzwa parizvino, uye kutsungirira kudzamara shanduko yaunoda yaitika (uye kupfuura).
Kunyangwe iri kudzidza mutauro mutsva, kuonda, kana kukwira manera ebasa, iwe unofanirwa kutora chiito chakabatana uye chichienderera mberi kuti usvike kwaunoda kuve.
Iko hakuwanzo chero mapfupi anowanikwa - kunyangwe hupfumi hwemari hune zvahunogumira kana iwe usina kugadzirira kushandira zvakaoma chimwe chinhu.
Oo, uye chimwe chinhu, rangarira iyo yose synergy chinhu chatataura pamusoro apa? Izvo zvinongoshanda chete kana danho ratorwa. Unogona kushuvira mumwe munhu zvakanaka kana kutaura zvinhu zvakanaka, asi iyo 'iwe' iyo inowonekwa nemunhu wese inonyanya kuvakwa nenzira yaunoita uye nezvaunoita.
Kana iwe uchida kuti 'iwe' ave nani, saka chinhu chega chine musoro chekuita kutora matanho, nekuti zviito zvako zvinotaura zvinonzwika kupfuura mazwi ako uye pfungwa dzako dzese dzakanyarara.
Pasina zvinoreva chero kukanganisa kukuru, kuisa mumwe munhu 'mundangariro dzako neminamato' hazvisi kuzozvicheka KANA pane chimwe chinhu chinoshanda chaunogona kuita.
Pane mumwe munhu waunoda nezve kurwara here? Usangovashuvira kukurumidza kupora, enda uko, fadza mweya yavo, tora chikafu chakabikwa kumba kuti vadye, vape kuvaitira mabasa epamba… ita chimwe chinhu. Izvi zvinoreva kuti miriyoni zvakapetwa kwavari kupfuura kugamuchira zvishuwo zvako zvakanaka.
Vakawandisa vedu vanohwanda kuseri kwemifungo yedu inoreva uye mazwi kudzivisa zvinhu zvinoita mutsauko chaiwo. Ehe, kuchinja nzira yaunofunga nezvayo nekutaura kune vamwe kunogona kukuita munhu ari nani, asi ivo vanongova donhwe mugungwa kana zvichienzaniswa nezvakanaka zvaunogona kuita kuburikidza nekuita.
Zvinyorwa zvinoenderana (chinyorwa chinoenderera pazasi):
Kana Iwe Uchitya Kutevedzera Doto Dzako, Verenga Izvi
20 Kusanzwisisika Kunzwa Kunotaridza Kuti Uri Panzira Yakarurama
40 Zviratidzo Zvauri Kuita Zvakanaka Muhupenyu Kunyangwe Iwe Usinga Funge Saka
Nzira gumi dzaunogona Kuchinja Nyika Kuti Ive Nani
3. Zvipe Nguva Yakaringana
Zvichida chikonzero nei vazhinji vedu tichisiya shanduko inyaya yekuti tinoregeredza kufunga nezvekuti zvingatora nguva yakareba sei. Kana kufambira mberi kusingaonekwe nekukasira, zvinogona kuve nyore kwazvo kudzokerazve mukugutsikana.
Kana iwe uchishuvira kukura semunhu uye kuva munhu ari nani, iwe unofanirwa kubvuma kuti zvinotora nguva. Iwe unofanirwa kukumbundira ichi chokwadi uye kudzidza kuona rwendo, pane kuguma chinangwa, sekubudirira kwako kukuru.
Sekondi yega yega iwe yauri kushandira chinangwa ndeyechipiri yaunofanirwa kuona seinokosha. Chimwe chinhu chingatora vhiki, mwedzi, gore, kana hupenyu hwese kuti upedze, asi izvi hazvifanirwe kukutadzisa kuedza.
Uyezve, iwe uchasangana nematambudziko munzira, saka gadzirirawo ivo. Kunyangwe iwe uchida kuchinja maitiro, kunatsiridza hupenyu hwako mikana, kana kuwana mufaro uye kugutsikana , pachave nezvipingamupinyi zvekukunda - zvisingaite mupfungwa dzako.
Kuva nechido uye kutsunga kuenderera mberi zvisinei nematambudziko aunotarisana nawo anodikanwa kana iwe uchizadzisa izvo iwe zvaunoda.
Kuve munhu ari nani hazvireve hazvo kuti zvinoda kusagadzikana kukuru, asi kunyangwe shanduko diki kwazvo zvinotora nguva kuti uve netsika. Ingo usaenda kuisa muganho wenguva pazvinhu izvi nekuti haugone kugara uchifungidzira kuti vangatora nguva yakareba sei.
4. Gamuchira Kuti Kuchinja Kunotyisa
Kuva munhu ari nani uye kufamba munzira yekuzvikurira zvinoda kushinga, nekuti shanduko chinhu chinotyisa.
Kuchinja iwe pachako kunotyisa nekuti iwe wajaira izvo zvauri izvozvi, kuti kuve munhu mutsva kwakafanana nekuberekwazve mune rakasiyana nyika.
Kuzvinatsiridza iwe, kungave mumuviri, mupfungwa, kana mumweya, kukwakuka kuenda kusingazivikanwe, iko mune ramangwana risingatarisike uye mhedzisiro isina chokwadi.
Asi, hei, ndizvo zvazviri nezvese zvinhu muhupenyu. Zvakawanda sekuda kwaungade kuedza, kufanotaura kunyangwe zuva riri kumberi kwakaoma uye sezvaunofambira mberi uchienda mune ramangwana, zvinova padyo nezvisingagone.
Asi pane mutsauko, iwe unogona kunge uchifunga, nekuti nguva zhinji zvinhu zvinoitika kwauri. Kuva munhu ari nani, kune rumwe rutivi, zvinoda kuti iwe uite kuti zvinhu zviitike uye izvo zvinosanganisira mutoro.
Ndizvozvo! Iwe ndiwe unokonzeresa shanduko dzaunoita iwe muhupenyu hwako uye kukanganisa kungave nako kune vamwe. Kusvikira iwe uchida gamuchira mutoro uyu , iwe uchave chando nekutya kweiyo nyowani, iyo novel, uye zvinhu zvingangotadza.
Asi yeuka izvi: nhamo yakachengeteka, mufaro unotyisa.
Uri kuverenga ichi chinyorwa, zvimwe, nekuti iwe unoda kuve munhu ari nani, uye kuti uite izvo uchafanira kuzvigamuchira izvo. shanduko, nepo ichityisa, haina kumbotyisa sekumira.
Chikonzero isu tisingatyi kudzikira ndechekuti isu kashoma tinombofunga nezve zvazvinoreva. Paunogara pasi uchifungisisa nezve hupenyu pasina chinoshanduka, pane zvese zvazviri sezvazviri ikozvino, unoona kuti uyu hausi hupenyu chaihwo zvachose.
Hupenyu shanduko, hupenyu kukura, hupenyu hunoenderana nemamiriro matsva uye akasiyana. Kunyangwe zvikaitika kwauri kana iwe ukaita kuti zviitike, shanduko haidzivirirwe iwe haungave here uine vamwe kuti vataure uye vatonge pamusoro payo?
Muchidimbu, saka: kuva munhu ari nani unofanirwa kuedza kuzvipa kune vamwe, uchitevera zvido zvako nekutora nekuomerera pazviri, uchizvipa nguva yekuenderana neshanduko, uye kukunda kutya kwako kwezvaingaite zvinoreva kukura uye kukura.
kusaina mukomana haasi iwe
kutamba sei mutambi mushure mekurara naye
shamwari yangu yepamwoyo iri kuenda kuburikidza nekurambana
maratidziro atingaita vamwe
kana murume akasiya mukadzi